Mkpụrụ Elu: Olee otú ndị omekome Cyber ​​nwere ike isi tọọ gị ntanetị n'Ịntanet?
Ịntanetị emeghewo ohere ọ bụla na-enweghị oke maka onye ọ bụla. Ọ dị mfe. Ọ bụmfe. Ọ dị egwu. Ị nwere ike ịzụ ahịa, ịkwụ ụgwọ, na-ekiri ihe nkiri, nweta ozi, mee ka ndapụta ala, rụọ ọrụ gaa na ọtụtụ ndị ọzọ. Dịka ụwa dumọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-ahụ ụzọ ọhụrụ iji jiri ịntanetị eme ihe, ndị omempụ na-arụ ọrụ na-emepụta ihe kama iji wuo ya, ha na-achọ ịcha, na-ezuru ma na-ezu ohi. Ya mere,kedu ka ị ga - esi nọrọ n'enweghị nchedo site na ndị aghụghọ?
Ọfọn, azịza ya dị mfe: ịmatakwu ihe ntanetị na weebụ, nke Max Bell kwuru,Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ahịa nke Ọkachamara ,ma ị gaghị aghọrọ gị.
Achọpụta emetụ emetụ
N'afọ a (2017), ọnụ ọgụgụ ozi ịntanetị nke e zitere bụ 155% karịa karịaafọ gara aga. Azu ojoo na-adabere na nkwukọrịta a na-etinye na netwọk mgbasa ozi mmadụ ma ọ bụ site na email. N'ebe a, onye na-eme ya na-anwana-eme ka ị kwenye ịkọ ọkwa nọmba kaadị akwụmụgwọ gị, nkọwa ụlọ akụ, nbanye ma ọ bụ data ọ bụla ọzọ. Enwere ike ịkwalite gị na ịpị anjikọ. Nke a bụ ụzọ nke ịgbasa malware na-ezu ohi na usoro gị. Na usoro ọma antivirus dị mma, nke ị ga-enwe ikegbanyụọ ojoro a.
Ọkachamara a na-agụnye emelite email, ozi ederede, ma ọ bụọbụna ozi gbasara ozi mgbasa ozi nke otu nwanyị nọ ná nsogbu zipụrụ. Ọ na-ekwu na ọ bụ onye nchịkọta bara ọgaranya, onye ahịa ma ọ bụ onye ọrụ gọọmentịna-arịọ gị ka o nyere ya aka weghachite ego mgbe ị ga - enweta ego. Nke a bụ ọnyà: ị na-enyere aka ịkwụ ụgwọ ụfọdụ mgbe ị ga-enwetaghachinnukwu òkè.
Aja ojoo ekele
Na atụmatụ a, ịnweta kaadị ekele nke na-adịghị njọ 'site na enyi gị. Otú ọ dị, aejikọta ya ma ọ bụrụ na ịpịrị tinye tinye malware na ebe a na kaadị ekele. Ihe malware nwere ike ịbụ ihe ọ bụla site na mmemme mmejọnke na-ekpuchi mgbasa ozi ma ọ bụ windo na-atụghị anya na ihe nchọgharị weebụ. N'okwu kachasị njọ, ọ nwere ike ịbụ ihe mgbapụta - onye ọ bụla na-atụ egwu.
Efu ojoo kaadị
Mgbe oge siri ike, ndị mmadụ na-esi ụzọ dịgasị iche iji nweta enyemaka ego.Otú ọ dị, ịnwere ike ịnweta onyinye nke dị oke mma ịbụ eziokwu. Were ihe atụ a: ị nọ ọdụ azụ nke ụgbọ ala na-aga n'ụlọ mgbe ahụnweta ozi na ị nwetara akwụkwọ ikike akwadoro na enweghị mmasị..Akwụsịla maka ojoro a. Jiri ezi uche.
O doro anya na ọ bụ ihe kachasị njọ n'Ịntanet. Ọ na-abịa site na email. Ozi ziri ezi:ị merie mmeri ego na lotrị ma ọ bụ na-enyefe ọrụ ebere, mana maka ịza ego gị, ị ga-akwụ ụgwọ ụgwọ nhazi ma ọ bụ ihe ọ bụlana akara ahụ. Ọ ga-eju gị anya na ọnụ ọgụgụ nke mmeri ndị meriri n'enweghị ikere òkè n'ezie.
Nke a bụ ịpụnara mmadụ ihe. Onye na-eme ihe ọjọọ na-eyi egwu igbu gị ma ọ bụrụ na ịkwụghị ụgwọ.Ha na-asị na e goro ha ka ha gbuo gị na mbụ, mana ha (ndị ọkụ ọkụ ahụ weere na ị na-agwa gị ka i wee kwụọ ha ụgwọ ịhapụ gịn'udo. Ihe dị egwu bụ eziokwu na ha nwere ike ịkọ ọrụ gị.
Ọ na-eleta ịntanetị na ebe nrụọrụ weebụ. A pụrụ igbu atụmatụ ahụ maka ọtụtụ ọnwa na nkenke naaghụghọ. Onye ọ bụla nwere ike iji nwayọọ nwayọọ na-enweta ntụkwasị obi gị site n'ịnye gị onyinye. Otu ụbọchị, ha na-ekwu na ịnọ na mberede. Ọtụtụ mgbe, onye ikwuga-arịa ọrịa ma ọ bụ azụmahịa ha akụdaala n'ihi enweghị ego. A na-arịọ gị ka ị zitere ego nke a ga-akwụghachi.
N'ebe a, ị ga-enweta ozi ọma na ị bịarutewo ọrụ ego dị oke ụgwọ na-akwụ ụgwọ ego. Ebe ahụỌ bụ ezie na. Iji nweta ọrụ, ị ghaghị ịkwụ ụgwọ ụfọdụ.
Na-apụta n'oge ezumike dị ka n'oge okpomọkụ ma ọ bụ na Krismas. N'ebe a, e kwere gị nkwa na ọ dị mmangwugwu njem na ọnụ ala dị ọnụ ala. Iji zere ịghọ onye a na-ata ahụhụ, lelee nyochaa nke weebụsaịtị ahụ. Ọ nwere ike ịzọpụta gị ego.
Ndị ọzọ scams
Ntanetị weebụ na-ere ahịa na-ezighị ezi - mbipụta zuru ụwa ọnụ na ihe eji eme ihe na-enweghị atụndị na-ere ahịa n'Ịntanet na-achọ ịzụta ihe ọhụrụ.
Nkọwa akụkọ mgbasaozi - nkọwa onwe gị Source .
Adịgboroja antivirus usoro scam